Thwebula yakamuva udumo umkhiqizo cd generator key futhi zikhiphe siqu kusebenze khulula ukhiye wakho cd ....
abadlali Hi, abasebenzi bethu ithole NFS Most Wanted CD Key Generator ...
Mafia III obala emhlabeni action video game mayelana ezigebengu. Isihloko kwatholwa Hangar muva esungulwe 13 studio, ukusebenza ngaphansi Thatha-Two Interactive. I studio isebenza nge ex-amalungu 2K Czech (phambilini obuwaziwa ukubizwa ngokuthi Inkohliso Softworks), iqembu ngemuva ngqa 2 izingxenye uchungechunge. Lokhu sha isiqophi game studio Czech wethulwa ku-PC kanye, okokuqala kakhulu emlandweni yochungechunge, use 8 isizukulwane aduduze.
Umdlalo vidiyo embeded ngonyaka 1968, New Orleans. Uhlamvu eyinhloko kungukuhlasela Lincoln Clay, isosha impi eVietnam futhi ilungu mafia. 'Nendlu yakhe’ ekhashelwa futhi eyenziwa ngaphandle umusa. Isitayela eyinhloko umdlalo vidiyo lokuphindisela balandise ngamanye ekuqedeni abantu Lincoln sika – Marcano usawoti, baba ku ka beyisixuku Italy, abathenge ukubhuqwa. Ngo wawuyini umsebenzi wakhe ngesikhathi Clay kungaba ihambisane abanye abaqashi lobugebengu, ehlanganisa i gangster Irish elibizwa Burke, Cassandra, inhloko igenge Haitian, futhi uVito Scaletta, uhlamvu ukuhola Mafia II.
Mafia isiqophi imidlalo empeleni njalo imisiwe emihlabeni evulekile, ngokuya Gameplay 3 ingxenye esondela ukuba baphikisane Grand Theft Auto uchungechunge. Imigwaqo New Orleans zigcwele imisebenzi eminingi ezengeziwe, okuyinto wena yokuthopha ukuqedela phakathi Izinjongo ezinkulu. Phakathi umahluko omkhulu kunabo bonke phakathi Mafia kanye GTA lihlelo uchwepheshe we-New Orleans’ abantu. Ukuze uhlamvu phambili, non-player izinhlamvu liyakwazi ukuhlanganyela emisebenzini ehlukene. Ungakwazi ukuza kulo imibhangqwana ukuqabulana, abayimilutha ejabulela isimiso sabo, noma abaculi emgwaqweni.
Esinye isici sha lenani Ukhiye ehlukile ukuthatha ukulawula ezinqabeni kwezigcwelegcwele nobutha. Ngemva bebutha indawo ethize ungakwazi uyinikeza phansi phakathi capos yakho. Lokhu kukhipha izinzuzo ezahlukene, e.g. ukukhetha ukuze uxhumane 'abakhwele amahhashi’ ukukusiza ukuqeda Challengers nokujaha, noma asule amaphoyisa ukulahla ukuphishekela.
Lesi sikhathi umlingisi phambili has a spectrum ebanzi kunalokho samakhono. Lincoln angasebenzisa namavolovolo, nenganono, izibhamu, gatling isibhamu, namabhomu, nakuba kungenzeka ukuletha nje 2 izinhlobo izikhali ngesikhathi esifanayo. Umdlalo isiqophi ngokufanayo Ihlanganisa isimiso ikhava nobungqabavu ngesandla ukuze ngesandla impi, ehlanganisa nabangenasihawu oshaya nezimbi. Esinye isici esibalulekile Gameplay ngokudubula ngenkathi ukufuya izimoto iloli– the oluphethe wabaselwa kakhulu sithuthukiswe. Mafia III has a elihlangene impilo Kabusha uhlelo. ibha Impilo ihlukaniswe 3 imikhakha, okuyinto ukubuyisela ngokushesha ngaphandle beyeka ukuba nhlobo– lapho ukuthi kwenzeka, udinga ukusebenzisa medkit ukugcwalisa zayiqeda.
Ngokungafani zokugcina 2 Mafia isiqophi imidlalo, okuyinto wazala ukufana xaxa action-adventure isiqophi imidlalo, Mafia III ye-PC / Windows yenza isenzo esikhulu indaba Sandbox, okuyinto isici esiyingqayizivele GTA uchungechunge. Bobabili franchise basonta Take-Two Interactive, le 2 Abaklami ukusebenzisa ongakhetha abo ngokuya Gameplay nemibono emisha. I jikelele Gameplay nakho is nakakhulu zaguqulwa ihluzo oluvelele.